Kuxigeenka Puntland Camey ”Amarka ka dhan ka ah gaadiidka Koofurta waa mid lagu xaqiijinayo amniga” – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Kuxigeenka Puntland Camey ”Amarka ka dhan ka ah gaadiidka Koofurta waa mid lagu xaqiijinayo amniga”
Puntland ayaa sheegtay in amarkii dhawaan ay ku soo rogeen gaadiidka ka yimaada Koofurta Soomaliya ay gonleeyihiin xaqiijinta amniga deegaanada Maamulkaasi.
Madaxweyne Ku Xigeenka oo maanta la hadlaayay Warbaahinta, ayaa sheegay in cidii ka hortimaada amarkii toddobaadkii hore Puntland soo rogtay ee ahaa, inaysan wax gaadiid ganacsi ah kaga imaan karin Koonfurta Somaliya, si ay u xaqiijiso ammaankeeda, ay u arki doonto kuwo qayb ka ah Al Shabaab.
Madaxweyne Ku Xigeenka, ayaa yiri “Dadka reer Puntland ee ka hadlaaya dhinaca gaadiidka, waxay ila tahay inaysan feker wanaagsan ahayn ama caafimaad qaba, in qof danahiisa gaar ahaaneed uu fiirsado. Waxay ila tahay in dhiigga dadka lagu xalaashado ama la hordhigo nin jeebkii wax geli lahaa.”
“Hadaba ragga ka hadlaaya gaadiidkan iyo arrimahan waxaan dareemayaa in ay qayb ka noqon karayaan, dowladuna ay u qaadanayso nimankii ku soo daabulaayay hubka iyo ragga. Haddii ay Galgalo tahay, Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo tahayba inay ka mid yihiin, dowladuna ilgaar ah ayay ku heynaysaa.”
“Waxay ila tahay ganacsatada waxa faa’iidada ugu jirto dowladdu waa ogtahay. Ganacsato keligeed ma shaqayn karto, dowladuna ganacsato la’aan ma shaqaynayso. Waan ognahay faa’iidada ay dalka u soo hooyaan, wadaniyadoodaa ognahay.”
Previous: Rasmi: Laacibka reer Germany Mustafi oo ugu dambeyn ku biiray Arsenal
Next: Daawo:Xeer ilaaliya guud ee qaranka somaliya oo sheegay in La Tayeynayo shaqaalaha Dowladda